कलियुगका कुरा: माओवादीको नि अब लिङ्ग छुट्टिन्न जस्तो छ
माओवादीको नि अब लिङ्ग छुट्टिन्न जस्तो छ
एमालेले माओवादीलाई पनि लिङ्ग नछुट्टिएको पार्टी बनाइदिन्छ कि के हो? - विदेशाँ भाका एक मित्रले भन्या। विदेशाँ हुने केहीलाई अलिक बढी नै माया छ नि माउवादीको। माउवादीहरु एकदिन भन्छन् सरकारमा जाने भइयो ग्यारेन्टी भोलिसम्म सरकार, अर्को दिन भन्छन् सरकारमा नजाने भइयो, समर्थन मात्र। यस्तो कुरा गर्नेलाई लिङ्ग नभाको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? संगत गुनाको फल भन्छन् एमालेसँगै लामै सहकार्य गर्यो भने माउवादीको नि लिङ्ग छुट्टिन्न होला..